२0७४ श्रावण ९ सोमबार | ०६:१३:४७ Toggle navigation home
प्रवासबाटै संगितमा निशानेपाल तरुण दल महाधिवेशन : 'खड्काले रन्किदै भने मेरो टिम यो हो'सिटी एक्सप्रेस कहिले पर्छ छानबिनमा ? यस्ता छन् मालिकका कर्तुतलोक गित सुन्दा सुन्दै खानै विर्सिन्थे - तिर्थहारको झोंक फेर्दै पौडेल ! पाँच हजार झण्डा र तीन हजार प्रतिवेदन पोखरामायसो गरे कसो होला ? ५४अर्व नतिरे एनसेलको सेवा बहिष्कार !सगरमाथा यातयातले ल्यायो छुटमा अशोक लेलैण्डका बसहरुगायक एबं मोडल बिशुले ल्याए सुटुक्क थाहैनपाई सजाए छुदसैंअघि नै केन्द्रीय समितिले पूर्णता पाउनेसेनामा नयाँ चलखेल कांग्रेसको नेतृतवमा देउवा की निधि ?
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री बिमलेन्द्र निधिले घेरावन्दीमा पारेर कांग्रेसलाई रसातलमा फसाउने डिजाइन बनाएका छन् । लोकतान्त्रिक पार्टीको रुपमा आफ्नो पहिचान बनाउन सफल नेपाली कांग्रेसलाई विधि र बिधान भन्दा पनि आफ्नो इन्ट्रेस्ट अनुसार निधिले चलाउन थालेका छन् । कांग्रेसका सभापति देउवालाई घेरावन्दी पारेर फसाउने निधिको डिजाइन छ ,त्यसमा देउवा श्रीमती आरजुको पनि साथ छ । कांग्रेसको नेतृतवमा देउवा की निधि ?यस्तै चर्चा कांग्रेसजनमा चलेको छ ।
निधिको सल्लाहमा फसेका कारण पार्टी पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीको सोमबार संसदीय दलको बैठकमा दिइएको सुझावलाई समेत सभापति देउवाले लत्याउँदै निधिको सल्लाहलाई शिरोधार्य गरेका छन् ।
पूर्वपदाधिकारी र बरिष्ठ नेता सबैले पाँच नम्बर प्रदेशबाट पहाडि जिल्लाहरु गुल्मी, अर्घाखाँची, पाल्पा, प्यूठान, रोल्पा र रुकुम जिल्लालाई चार नम्बर प्रदेशमा नगाभ्न सुझाव दिएका थिए । पार्टीमा संस्थापन पक्ष र सभापति देउवाकै दाहिने हात भनिएका रक्षा मन्त्री वालकृष्ण खाँडले समेत देउवालाई निधिको सल्लाहमा नहिँड्न बारम्बार सम्झाएका थिए ।
देउवा पक्षकै बरिष्ठ नेता गोपालमान श्रेष्ठ, चन्द्र भण्डारी, बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समेत असहमति जनाउँदै स्थानिय जनता र जनप्रतिनिधिका सुझाव र सल्लाहबाट मात्र प्रदेशको सिमांकन हेरफेर गर्न भनेका थिए । युवा नेता चन्द्र भण्डारीले पाँच नम्बर प्रदेशबाट पहाडका जिल्ला हटाए कैलालीको टिकापुरमा जस्तै हिंसात्मक घटना हुने चेतावनी दिएका थिए ।
रक्षा मन्त्री समेत रहेका नेता वालकृष्ण खाँडले पाँच नम्बर प्रदेशका जनताले माग नैं नराखेको प्रस्तावलाई माथिबाट लादिएमा शान्ति सुरक्षा खल्बलिने चेतावनी दिएका थिए । संविधान संशोधनको मस्यौदा बिमलेन्द्र निधिले देउवा मार्फत पार्टीका शीर्ष नेता तथा पदाधिकारीसमक्ष राख्दा कसैले पनि समर्थन गरेका थिएनन् ।
निधिले दिएको लिखत देउवाले पढे पनि त्यस्तो प्रस्तावलाई बिधेयकको रुपमा प्रस्तुत गरे संविधानको स्वीकार्यता वढ्ने र संविधान कार्यान्वयनमा टेवा पुग्ने कुतर्क गरेका थिए ।
देउवाले पाँच नम्बर प्रदेश टुक्र्याउने प्रस्ताव गर्दा निधि र लेखकबाहेक सबैले बिरोध जनाएका थिए । बिरोध मात्र होइन, पूर्वअर्थमन्त्री डा। रामशरण महतले यस्तो प्रस्ताव कांग्रेसको नभएर कांग्रेसलाई वद्नाम गर्नेहरुको भएको बताएका छन् ।
एनसेलको लूटमाथि टावर फोर्ने देखि सेवा बहिष्कार गर्ने कता हराए ?देउवाको हातमा केसीको जीवन !गायक तिवारी भन्छन्,'बाचुन्जेल सांगीतिक छेत्रमा हिडिरहनेछु'संगीतमा रमाउदैँ हेमन्त !प्राण रहुन्जेल गीत संगीतमा जम्ने प्रणगृहमन्त्री ज्यू, कहिले एक्सन चाल्ने ?'उपसभापति भारतले मानेन भन्न लाज लाग्दैन्' ? ,सभापति देउवाज्यू !प्रवास भनेर काहाँ भो र ? गीत संगीत बिर्सन सकिदैन-सर्जक रत्न बुढाप्रवासबाटै संगितमा निशानेपाल तरुण दल महाधिवेशन : 'खड्काले रन्किदै भने मेरो टिम यो हो'सिटी एक्सप्रेस कहिले पर्छ छानबिनमा ? यस्ता छन् मालिकका कर्तुतलोक गित सुन्दा सुन्दै खानै विर्सिन्थे - तिर्थहारको झोंक फेर्दै पौडेल ! पाँच हजार झण्डा र तीन हजार प्रतिवेदन पोखरामायसो गरे कसो होला ? ५४अर्व नतिरे एनसेलको सेवा बहिष्कार !सगरमाथा यातयातले ल्यायो छुटमा अशोक लेलैण्डका बसहरुएनसेल प्रकरण, करोड खुवाएर अर्ब लुट्न चलखेलराजश्वका डिजी चुडामणि शर्माको उत्पात कहिले सम्म हो ?गायक एबं मोडल बिशुले ल्याए सुटुक्क थाहैनपाई सजाए छुदसैंअघि नै केन्द्रीय समितिले पूर्णता पाउनेएनसेल प्रकरणमा : ओली, देउवा परिवार र प्रचण्ड परिवारलाई पनि प्रलोभन देखाउँदै आचार्य दाजुभाइप्रशासन र बलियो नियामक नहुँदा एनसेलको राजएनसेल प्रकरण: राजस्व विभागले ठोस जवाफ नदिए पछि सीआईपी सम्मान रोकियोसेनामा नयाँ चलखेलगीत बिमोचनसगैँ यसकारण दङ्ग हट मोडल !एनसेलले ब्रान्डिङ सुरु गरे पनि कर विवाद झन बल्झदैगल्ती लुकाउन बाबुछोरालाई खोरमा !सेनामा नयाँ चलखेलआईजीपीको लागि अहिले देखि यस्तो दौड !प्रहरीमा सरुवाको दौड‘‘हलो हट्काएर गोरु चुट्ने काम एमालेले ... - काँग्रेसका नेता रामहरि खतिवडानेबिसघको नसकिँदै तरुणका नेता यस्तो रन्कोमाप्रभाबशाली नेता खड्का स्वदेश फिर्ता , विमानस्थलमा भव्य स्वागत featured video